Izimboni Zokwakha Izimboni - I-cutterhead & Swinging Ladder Dredges
I-Ellicott Dredges idizile futhi yakhiqiza izindawo zokuhlala kanye nemishini yokuphinda isetshenziswe kwizicelo ezahlukahlukene kanye nemikhakha yemakethe enjengesihlabathi kanye nokugawulwa kwamatshe amatshe, ukuphinda kuvulwe umhlaba, kanye namachweba okuqala kanye namachweba. Amawadi wedada we-swinging asetshenziswa kakhulu ekuvuseleleni, emvelweni nakwimiklamo ehlobene nomsele. Ngabe udinga okuthile? Noma udinga usizo lokunquma usuku olulodwa lwephrojekthi yakho? Shayela +I-1 410-545-0232 noma uqedele eyethu ifomu lemininingwane yeprojekthi, nethimba lethu lokuthengisa lizokuthinta ukuxoxa ngezidingo zakho.